Tech masheya anotyisa vatyairi | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemaseketi mumisika yemari inogona kuisa vashoma uye vepakati-vara varimi mukutambudzika kukuru tekinoroji. Kuita uku kuri kukonzerwa nenyaya yekuti rave riri rimwe remapoka akanyanya kufarira mumwedzi yatakange tiri muna 2018. kuonga padyo ne25% uye izvo zvinotikurudzira kuti titonyanya kungwarira neaya mazano emusika wemasheya kubva zvino zvichienda mberi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvichanyanya kuve zvakaomarara kwavari kuti vachengetedze aya akasarudzika mareshiyo mune avo profitability.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kurangarirwa kuti kana paine shanduko yezviri kuitika mumisika yepasi rose, ichave chaiyo kuchengetedzwa kwetekinoroji ine nguva yakaipisisa mukuumbwa kwemitengo yavo. Chikamu, uptrend kune downtrend, inofungidzirwa nevanoongorora zvemari. Kunyanya munzvimbo yakabatana senge iyo inogona kuitika kubva gore rinouya. Nekuti aya akakosha maitiro anoonekwa nekuti anokwira zvakanyanya, asi zvakare nekuti ndizvo zvakasarudzika ma euro munzira. Chinhu icho pasina mubvunzo chinogona kuitika, kunyange hazvo chisingazivikanwe kubva pazuva ripi.
Chimwe chinhu chinoita kuti vatengesi vave nehungwaru panguva ino inyaya yekuti kune chikamu chikuru chevanoongorora zvemari kukosha kwehunyanzvi vakawedzeredzwa. Ndokunge, iwo anodhura kwazvo uye usati watora zvinzvimbo iwe uchafanirwa kuvamirira kuti varatidze mitengo inokwikwidza kupfuura yavanayo izvozvi. Kusvika padanho rekuti pachange paine nguva dziri nani dzekutenga zvikamu zvako nemitengo iri nani, kunyangwe mushure memwedzi yakawanda kana kunyange makore. Iyo iripo nharaunda haina shungu kwazvo yekutenga mumisika yequity. Kanenge kwemwedzi mishoma.
1 Tekinoroji: teerera kune ako ma index
2 Zvinotyisa zvemwedzi mishoma inotevera
3 Pasi pekunyanyisa kusagadzikana
4 Kunyanya kunetseka kuderera
5 Nei vakanyanya kuwedzerwa?
6 Rudzi rwebhizinesi rinodzokororwa
Tekinoroji: teerera kune ako ma index
Sangano rinoshanda kwazvo rekuyera mashandiro emakambani ekuzvibata kuti aongorore shanduko yezvikamu zveiyi bhizinesi chikamu. Mupfungwa iyi, yakakosha poindi yekureva ichaumbwa nehunhu hwetekinoroji musika par kugona, iyo Nasdaq 1000. Pamusoro pazvose, zvichave zvakafanira kuti iwe usasiya iyo nhanho yemapoinzi e2.400 chero nguva. Ichave imwe yemakiyi ekupinda kana kubuda iwo tekinoroji hunhu uine zvimwe zvivimbiso zvekubudirira. Kunyangwe paine chokwadi chekuti nzvimbo dzekutenga dzinogona kuiswa kune vatengesi. Izvi zvinogona kuongororwa mushure memazororo.
Nepo kune rimwe divi, kune zvekare chikonzero che kubviswa kwesimba remari mumisika uye izvo zvatove zvaziviswa neEuropean Central Bank (ECB). Kusvika padanho rekuti inogona kutanga kubva gore rinouya uye inogona kuve nemhedzisiro yakaipa pane ino kirasi yekuchengetedzwa izere. Hazvishamise kuti vangave vari vamwe vevakanyanya kubatwa muchiitiko ichi chinomuka chemwedzi inotevera kana makore. Iko vashoma uye vepakati varimari zvirokwazvo vane zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana. Izvi zviri nyore.
Zvinotyisa zvemwedzi mishoma inotevera
Hapana mubvunzo kuti hunyanzvi hwetekinoroji hunokwanisa kupa inopfuura imwe kushamisika zvisina kunaka mushure mezororo uye kunyangwe zvichangobva kukwira mumisika yemari. Nekuti zvirizvo, kuchengetedzeka nehunhu uhwu kwakanyorwa, kupfuura nemhedzisiro yebhizinesi yakapihwa kota yega yega, nekutarisira kwekukura kunopihwa nemakambani aya. Kuve mune chero yezviitiko, imwe yeakanyanya kukanganisika mune e-bearish maitiro akagadzirwa mumisika yemari.
Izvo hazvigone kukanganikwa mune chero rukudzo kuti ndizvo chaizvo zvigadzirwa zvehunyanzvi izvo zvinonyanya kukonzera kutyaira kwakakura muzvikamu zvine mutsindo zvemusika wemusika. Pamusoro pemamwe matekiniki akawedzera kana kushomeka cyclical uye anoitawo mushe mushe mamiriro akadai. Nepo pane izvo zvinopesana, mune bearish nguva ivo vanowanzo kukonzera kudonha kukuru mumutengo wezvikamu zvavo. Iine verticality inokwezva kutarisisa kune vese vadiki nepakati varimi. Nemacheka anogona kutodarika mashanu% mazinga mune yega yega yekutengesa chikamu.
Pasi pekunyanyisa kusagadzikana
Imwe yemasangano makuru akajairika mukirasi ino yemasheya ndiko kushomeka kwavo kukuru. Ndokunge, ivo vanopa yakaratidza misiyano pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi mukati mechikamu chimwe chete chekutengesa. Neine njodzi dzakasiyana siyana dzinogona pfuura 10% mazinga kana kunyanya dzimwe nguva. Nenjodzi inopfuura inoshamisa pane emari ekudyara evarairidzi vane ruzivo rushoma mumisika yemari. Hazvishamisi kuti zvinova zvakaoma kwazvo kushanda nemaitiro aya kana iwe usina degree rekudzidza. Nekuti hazvigone kukanganwika kuti njodzi dzakakura.
Kune rimwe divi, kusagadzikana uku kwatiri kutaura nezvako kunoita kuti nzira yekushandira muzvivigiro kubva kumatekinoroji matsva ive yakakosha. Izvi zvinodaro nekuti zvinofanirwa kuitwa kukurumidza kufamba mumisika yemari. Kunze kwekufungisisa kwayo kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Mune mamwe mazwi, iwo anofanirwa kuve akanongedzwa kune ipfupi izwi uye anenge asingamboite panguva yepakati kana refu-yenguva dzekusingaperi. Ichi chinhu chinoitwa nevashambadzi vane makore mazhinji echiitiko mumisika yemari vanoita zvakanaka kwazvo.
Kunyanya kunetseka kuderera
Izvo zvisina kukosha zvakanyanya inyaya yekuti tekinoroji tsika ichave iyo kukuvara zvakanyanya kuitira kumisikidza hupfumi hwakawanda. Icho chokwadi chekuti vanonyanya kukosha vanoongorora zvemari havasi kutonga kunze. Kana zvisiri, pane kudaro, vanga vachingoyambira kwemwedzi mishoma chete. Ichi ndicho chikonzero chinopfuura chinotyisa chekuti usaiswe munzvimbo idzi kana pakupedzisira nyaya inoshungurudza yehupfumi ichigonesa munhu wese. Nekuti kune rimwe divi, iwo makambani, kazhinji, asingagoveri chero chikamu kune vanozogovana, sezvazvinoitika, semuenzaniso, nemakambani emagetsi, mabhangi kana emigwagwa mikuru.
Mupfungwa iyi, nyanzvi dzemusika wemasheya dzinopa zano kutora chinzvimbo chakangwara nekirasi iyi yekuchengetedzeka kwakanyanya. Kusvika pakuti ivo vanouya kufunga kuti vakanonoka kupinda munzvimbo dzavo. Aifanira kunge akashandisa zvakanakisa makore akanakisa emusika wekutengesa maererano nekukosha kwawo. Ndokunge, pakati penguva dzakabatanidzwa pakati pamakore 2012 na2015. Iko kumwe kweizvi zvikumbiro zvemusika wemasheya zvakakwira pamusoro pe60%. Bhizinesi chairo revashandisi vakatora zvinzvimbo mumakore ekutanga emakore gumi aya. Kana zvirizvo, makorokoto, nekuti unenge waita mari yakawanda mukuita uku.
Nei vakanyanya kuwedzerwa?
Chimwe chinhu chinofanirwa kuongororwa ndechekuti zvikamu zvavo zvinodhura panguva ino, mumaonero echikamu chikuru chevanoongorora zvemari. Zvakanaka, nekuti aya marudzi emakambani anga aripo kukwira kumusoro kwemakore mazhinji, pamwe zvakanyanyisa uye izvi munguva pfupi inotevera zvichazopedzisira zvabhadhara neimwe nzira kana imwe. Vanogonawo kunge vakagadzira siringi inoenderana mumashoko avo, sezvingatarisirwa mumavhiki ano. Nekuti mukuita, ivo havazokwanise kukwira zvechigarire sezvave vachiita kusvika zvino. Pane imwe nguva panofanirwa kuve neshanduko huru muitiro.
Mupfungwa iyi, tekinoroji masheya ndicho chinhu chepedyo chaunogona kutaura kumakambani anotenderera. Ndokunge, ivo vari kufarira izvo zvinoitika, sezvinoitika nezvikumbiro zvemusika wemasheya senge Arcelor Mittal kana Acerinox, kungopa mienzaniso mishoma. Kunyangwe neakanyanya kutaurwa maitiro anogona kuwedzera mafambiro aya mumutengo wekutora. Kubva pane ino maonero, iwo machengetedzo ayo ari nyore kutevedzera uye pamusoro pezvese kuisa mari. Nekuti pane zvikonzero zvishoma zvekushamisika, neimwe nzira kana imwe.
Rudzi rwebhizinesi rinodzokororwa
Kana Iberdrola akamira kunze kwechimwe chinhu, imhaka yekuti inomiririra mutsara webhizinesi uyo unogara uchidikanwa nevagari. Vanoda simba kudzimba kana kubasa kwavo uye ino kambani inovawanisa mwedzi wega wega pasi pemutengo unowedzera gore negore. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei ichigovana purofiti kune vese vanogovana navo. Kusiyana nedzimwe mitsara yebhizinesi vanovimba nezvimwe zvinhu kutengesa zvigadzirwa zvavo kana masevhisi. Izvi zvinopa runyararo rukuru rwepfungwa kune vanoita mari vakatora zvinzvimbo munzvimbo iyi.
Kune rimwe divi, magetsi nderimwe remabhizinesi akanyanya kugadzikana mukati menzvimbo yebhizinesi yenyika. Nemakwikwi mashoma kwazvo nekuda kwezviitiko zvakasarudzika zvinogara chikamu ichi chakakodzera. Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvakaoma kwazvo kuti kirasi iyi yemakambani iparadze pane imwe nguva muhupenyu hwavo hwebhizinesi. Chinhu chisingaitike mune mamwe madhivhiti chinotapurwa neichi chinoshamisa chokwadi kana chichiitika mune mamwe makambani akanyorwa. Zvakawanda zvinofarirwa nevaponesi vehupenyu. Hapana chinoshamisa mune kukosha kwakadai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Tech masheya anotyisa vatyairi